गठबन्धनभित्रै दुई धार, के होला मधेसी दलको आन्दोलन ? – Himalaya TV
गठबन्धनभित्रै दुई धार, के होला मधेसी दलको आन्दोलन ?
१३ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०८:०७
काठमाण्डौ १३ जेठ । आगामी ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा संघीय गठबन्धन सहभागी नहुने भएको छ ।
शुक्रबार सकिएको गठबन्धनको बैठकले आफू सहभागी नहुने निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएको, सहमतिअनुसार स्थानीय तहको संख्या थप नगरेको तथा छुटेका मतदाता नामावलीलाई समय नदिएको भन्दै गठबन्धनले निर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाएको छ । निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रममा अवरोध गर्ने गठबन्धनको निर्णय छ ।
तर आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा गठबन्धनभित्र दुई धार देखिएको छ । राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रमसहित चर्को आन्दोलनको पक्षमा छन् । त्यसविपरीत शरत सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिल झाहरू निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यो मुद्दामा महन्थ ठाकुर बीचमा उभिएका छन् । गठबन्धनले यो आन्दोलनलाई रणनीतिक आन्दोलन बनाउन खोजेको छ | उसले प्रमुख दलहरूसँग संविधान संशोधनलगायतका केही मुद्दामा लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय तह थप्ने सम्बन्धीको मुद्दा र संविधान संशोधनको आधार तयार गर्न आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाइएको हो ।
‘केही दिनभित्रै राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्न लागेको छ, त्यसका लागि पनि आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ,’ गठबन्धन स्रोतले भन्यो । यो सहमतिमा एमालेलाई पनि समेट्नुपर्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । यहिबीचमा राजपालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने, निर्वाचन चिह्न लिने प्रयत्न पनि गरिनेछ ।
३१ जेठको निर्वाचनलाई १० देखि १५ असारसम्म वा कात्तिकमा सार्ने रणनीति पनि गठबन्धनको छ । निर्वाचनको बीचमा मुस्लिम समुदायको रमजान पर्व परेकाले सार्नुपर्ने उसको तर्क छ । दल दर्ता नभएको, निर्वाचन चिह्न नपाएको तर्क पनि गरेको छ ।
ठूला दलले मधेसका माग सम्बोधन नगरेको विषय प्रमुख एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क पनि एकथरी नेताहरूको छ । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।